Sahanka | HimiloNetwork
Himilo July 3, 2021	Leave a comment 97 Views
MUQDISHO (HN) — Xaalad dhif iyo naadir ah ayay la dhiban yihiin dadka deggan tuulada “Al-Keif” ee ka tirsan gobolka Kirkuk ee dhacda waqooyiga dalka Ciraaq. Inta badan carruurta deegaankan ayaa ku dhasha timo la’aan muddo sannado ah, iyadoo aan la ogeyn sababta. Waxay ka soo muuqataa carruurta bidaarta laga soo bilaabo dhalashadooda, Tani waa midda ku kaliftay dhallinyaro badan ...
Himilo April 8, 2021	Leave a comment 194 Views
MUQDISHO (HN) — Harada Jaceylka, oo qaabka wadnaha oo kale oo sameeyey, waxay dhacdaa saxaraha u dhow Dubai. Waana dabcan, bartilmaameedka dalxiiseed oo Bariga Dhexe ay lammaane badan usoo aadaan. Muqaallada halaasiga ah oo ay ku caan tahay Dubai sida Burj Khalifa ma ahan kuwa la koobi karo. Laakiin, hadda waxaa kale oo jira muuqaallo ildoogsi iyo dalxiisba leh oo ...
Himilo October 13, 2019	Leave a comment 509 Views
MUQDISHO (HN) — Haddii aad dooneyso in aad dareento farxad, waxaa jira toddobo hab-dhaqan oo aan wanaagsaneyn oo laga yaabo inay qaataan tamartaada ugu badan adiga oo aan wacaal u heyn. Sida lagu xusay warbixin ka soo baxday Forbes, keliya farxad kama helaysid marka aad joojiso dhaqamadan balse waxaad helaysaa kalsooni badan adiga oo si toggan uga falcelinaya deegaankaaga. 1) ...
Dhinaca Madow ee Adeegsiga Moobillada Smartphones-ka.
Himilo July 20, 2019	Leave a comment 571 Views
MUQDISHO (HN) — Waxaa aad iisoo jiitay sheeko lagu qoray Jariiradda Evening Standard taas oo cinwaan looga dhigay moobillada shaashadda leh oo adeegsadaha kala tagaya dareenka gurmashada – kana dhigaya goobjooge aan gacan fidiye noqon Karin. Dr Linda Papadopoulos ayaa tooshka ku ifinaysa tusaale dhawaan-gal ah oo muujinaya danbiile ku xad-gudbaya haweeney boolis ah – halkaas oo goobjoogayaashuna ay lasoo ...
Himilo April 15, 2019	Leave a comment 813 Views
MUQDISHO (HN) — Muslimiintu waxay yihiin dadka ugu qanacsanaanta badan nolosha, waayo waxay la nool yihiin kelinimada Eebbe marka lala barbardhigo diimaha kale, daraasad cusub oo lasoo saaray ayaa daaha ka rogtay, sida laga soo xigtay Daily Mail. “Daraasaddu waxay ifinaysaa xiriir weyn oo ka dhaxeeya rumeynta kelinnimada Eebe iyo qanaacada nolosha,” ayuu yiri Dr. Laura Marie Edinger-Schons, oo ah ...
Hadda qof walba qaabka socodkiisa ayaa lagu soo saari karaa.
Himilo February 28, 2019	Leave a comment 572 Views
Beijing (HN) — Iska ilow in qofka lagu aqoonsan karo wajigiisa oo kaliya. Hadda dalka Shiinaha ayaa sameeyey tiknoolojiyad cusub oo sahlaysa in qofka lagu aqoonsado qaabka socodkiisa haddii aan la fahmi karin wajigiisa ama uu sii jeedo. Barnaamijkan oo loo yaqaan gait recognition waxaa hindisay aqoon-yahanno bahoobay ayaa suura-gelinaya in qofka lagu heyb ogaado qaabka socodkiisa iyo dhaqaajinta xubnaha ...
Himilo January 24, 2019	Leave a comment 3,153 Views
MUQDISHO (HN) — Soomaaliya waa dal ku yaalo Geeska Afrika, wuxuuna ku fadhiyaa dhul baaxadiisu dhan tahay 635.541km2, waxana uu xuduud la wadaagaa Gacanka Cadmeed oo ka xigta Woqooyiga, Jabuuti oo ka xigta Woqooyi galbeed, Itoobiya oo ka xigta dhanka Galbeed, Kenya oo ka xigta dhanka Koonfureed iyo Badweynta Hindiya oo ka xigta dhanka Bari. Soomaaliya waxay ka mid tahay ...
Himilo November 19, 2018	Leave a comment 421 Views
Himilo November 19, 2018	Leave a comment 850 Views
RAMALLAH, West Bank (Himilonetwork) – Sheekada ku saabsan geed Seytuunka ugu cimriga dheer dhulka Falastiin oo la yiraahdo al-Badawi ayaa dad badan is-weydiinayaan goortuu curtay iyo inta uu sii jiri karo gu’ ahaan. Geedku wuxuu ku yaallaa xaafadda al-Walaja, oo shan kilomitir u jirta galbeedka Bethlehem, wuxuuna ku fadhiyaa bad dhan 250 mitir oo wareeg balac ah; wuxuuna dherer la’eg yahay 12 mitir oo ...
Kansarka sii badanaya oo cayilka lala xiriiriyay!
Himilo September 24, 2018	Leave a comment 634 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – In aad loo cayilo ayaa ayaa qayb wayn ka qaadata waxa sababa Kansarka sii badanaya ee UK, halka ay hoos uga dhaceen kansarka uu keeno sigaar cabbidda, sida ay sheegayso cilmibaadhis wayn oo la sameeyay. Xarunta Cilmibaarista UK ee la dhoho Cancer Research UK ayaa ogaatay in saddexmooloodow meel kansarka dadka ku dhacay in laga gaashaaman karay ...
Maareeye Bangi oo – si uu u kaalmeeyo Danyarta – u dhaca Koontada Maal-qabeennada.
Kenya – Hey’ad Guur u sameysa dhalin-yarada Muslimiinta ah oo aan heysan qarash.
Sucuudiga oo kordhinaya adeeg-dalxiiseedka Madina al-Munawarah.